Chrome Browser: အောင်မြင်သူလား။ 10 ၏အကောင်းဆုံး browser 2019 Linux မှ
a ကိုသုံးပါ «Navegador web» အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်အသုံးအများဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ပုံ «Navegador Chrome» de «Google» အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောစစ်တမ်းကောက်ယူမှု၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိပြီးနောက်တွင်မူ «Navegador Firefox».
သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးကတည်းကခေါ်တော်မူ «Netscape Navigator» ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်ယနေ့အထိထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည် «Navegadores web» အဝေးသို့ပြေး။ များစွာသောသူတို့သည်ပျောက်ပျက်ကြပြီ။ မည်သည့်ကိရိယာအမျိုးအစားကိုမဆိုအသုံးပြုပြီးကွန်ပျူတာအားလုံး (desktop, laptop သို့မဟုတ် mobile) တွင်အနည်းဆုံးအားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအားလုံးကထိပ်ဆုံးနေရာများကိုညွှန်ပြသည် «Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge y Safari».
1 10 ၏အကောင်းဆုံး browser 2019
1.1 ပထမနေရာ - Chrome Browser
1.1.1 Chrome Browser သည် Chromium မဟုတ်ပါ
1.1.2 Chrome Browser သည်နေရာအနှံ့တွင်တွေ့နိုင်သည်
1.2 ဒုတိယနေရာ - Firefox Browser
1.3 တတိယနေရာ - Internet Explorer နှင့် Edge ဘရောင်ဇာများ
1.4 ကျန်ရှိနေသေးသောထိပ်ဆုံး7ထိပ်ဆုံး 10
1.5 10 အထူးဖော်ပြသည်
10 ၏အကောင်းဆုံး browser 2019
ပေါ်မူတည် စစ်တမ်းကောက်ယူ ရာထူးများကွဲပြားနိုင်သည်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးအတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်လိမ့်မည် NetMarketShareအခြားအရာများအကြား၎င်းသည်တက်ကြွသောစစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကြည့်ချင်သောသူတို့အဘို့ အခြားစစ်တမ်းများသူတို့သွားနိုင်တယ် များအနက် နှင့်၏ W3Counter.
ပထမနေရာ - Chrome Browser
မည်သည့်စစ်တမ်းကိုမဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ၊ «Navegador Chrome» ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ။ ဤဆောင်းပါး၏ဖန်တီးမှုနေ့စွဲ (11/11/2019) အဖြစ် «NetMarketShare» မင်းကိုပေးတယ် «67,33%»တွင် «StatCounter» အောင်မြင်သည် «64,92%» နှင့် «W3Counter» ရောက်ရှိခဲ့သည် «NetMarketShare» 57,0% ။
Chrome Browser သည် Chromium မဟုတ်ပါ
ဤအောင်ပွဲသည်များစွာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသင့်သည် «Navegador Chrome» အဆိုပါဖြစ်ပါသည် «Navegador web» သီးသန့်နှင့်ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ် «Google»။ ထိုအတူတူပင်, နှင့်အတူမရောထွေးသင့်ပါတယ် «Navegador Chromium»ဘာလဲ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်း de «Google».
တတိယပါတီ developer များကလွတ်လပ်စွာစမ်းသပ်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်တော်ဥပမာများနှင့်အတူတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့: «Brave, Opera, Vivaldi» နှင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိသည့်နောက်တစ်နေ့ကြားမှာ «Navegador Edge» de «Microsoft».
Chrome Browser သည်နေရာအနှံ့တွင်တွေ့နိုင်သည်
ကွန်ပြူတာတိုင်းတွင်နေရာအနှံ့နီးပါးရှိနေခြင်းအပြင်၊ «Navegador Chrome» သံသယတစ်စီးရီးရှိပါတယ် အစွမ်းထက် features တွေတစ်ဦး အပြည့်အဝပေါင်းစည်းမှု ၏အကောင့်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ «Plataforma de Google», un ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောဂေဟစနစ် နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော applications များအစုံ။ ဘယ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူ့ကိုစေသည် စံပြ ၏ကျန်သည် «Navegadores Web» ရှိပြီးသား။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အခြားအရာများအကြား၎င်းတွင်အဓိကအသုံးချနိုင်သော application တစ်ခုရှိသည် «Sistemas Operativos» မိုဘိုင်း («Android y iOS»မည်သည့် desktop အသုံးပြုသူကိုမဆို၎င်းတို့သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည် ထပ်တူအချက်အလက် အောင်မြင်ရန် ပွင့်လင်းထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာသွားလာမှု သင့်ရဲ့မျိုးစုံ devices များအကြား။
Bookmarks, သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကိုချက်ချင်းထပ်တူပြုသည်။ ထပ်တိုးများကိုပင်ထပ်တူပြုခြင်း။ အကျဉ်းချုပ်မှာတော့၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုစွမ်းရည် «Navegador Chrome» ဒါဟာအဘယ်သူအားမျှဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယနေရာ - Firefox Browser
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည်အတိုင်း «Navegador Firefox» အဆိုပါဖြစ်ပါသည် «Navegador Web» ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးအပေါ်အကောင်အထည်ဖော် «Sistemas Operativos Libre y Abiertos»။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ «Navegador Firefox» ကတီထွင်သည် «Fundación Mozilla»အလှည့်အတွက်တစ် ဦး အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်လုပ်သော အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း applications များယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပြင်အထူးသဖြင့်ကိစ္စရပ်များတွင်ဖြစ်သည် privacy, လုံခြုံရေးနှင့်အင်တာနက်ကိုကျော်လွတ်လပ်ခွင့်.
ထို့အပြင် «Navegador Firefox» နှင့်အလွန်ရှိပါတယ် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု, တည်ငြိမ်မှု, ခေတ်မီ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးမှုနိမ့်။ နှင့်မကြာသေးမီကသူသည်မိမိစတင်ခဲ့သည် အရေအတွက် «versión 70» အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါး ၂ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်မှုနှင့်အတူ
Firefox 70 မှောင်မိုက်သော mode နှင့်အတူရောက်ရှိလာပြီး navigation bar နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
တတိယနေရာ - Internet Explorer နှင့် Edge ဘရောင်ဇာများ
မကြိုက်လား «Microsoft» အဆိုပါဖြစ်ပါသည် «Sistema Operativo» ကမ်ဘာပျေါတှငျအသုံးပွုနှင့်အကျိုးဆက်က၎င်း၏ «Navegadores web» တစ်ခုရှိသည် သစ္စာစောင့်သိအသုံးပြုသူများသိသာသောအဘို့ကို သူတို့ကိုတတိယနေရာမှာထားစေတယ်။ ဟုတ်လားပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပြဒဏ္legာရီပါ «Soló se usan para bajar Chrome o Firefox» အမှန်တရားကတော့သူတို့အဲဒီမှာရှိတယ်၊ အချို့ကသူတို့ကိုအမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်ရံဖန်ရံခါသုံးတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးသောထိပ်ဆုံး7ထိပ်ဆုံး 10
UC Browser ကို
Tor Browser ကို
တစ်ခုချင်းစီအတွက် «binomio» ရေးစပ် «tipo de usuario y tipo de ordenador» အချို့ရှိပါသည် «Navegador web» ကြောင်းအခြားသူများထက်အချို့သောပိုကောင်းကိုက်ညီ, သို့သော်, စံပြတ ဦး တည်းရွေးချယ်ရာတွင်မှတဆင့်သွား အချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဥပမာ -
ဝဘ်စာမျက်နှာ၏ startup နှင့် loading speed
လုံခြုံရေးနှင့် privacy ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်
ရှိပြီးသား Plugins နှင့် Extensions များ၏ဂေဟစနစ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အနေဖြင့်အာရုံပျက်စရာမလိုဘဲ လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်အမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံ နေ့စဉ် browsing ၏။
၏နောက်ဆုံးသောနှင့်အနည်းဆုံး, ၏ website တွင် အသားတင်စျေးကွက်ဝေစု သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းစနစ် အဆိုပါဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် စာရင်းအင်း, အမှု၌, မည်သူမဆိုဒီအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုမို delve ချင်တယ်။ ဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်လျှင်၊ မှတ်ချက်ပေးတာ၊ ဝေမျှတာကိုမရပ်ပါနဲ့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလူမှုမီဒီယာလိုင်းများ၊ အုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှအခြားသူများနှင့်အတူ. အောက်ပါဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုသေချာကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Chrome Browser: အောင်မြင်သူလား။ 10 ၏အကောင်းဆုံး browser 2019
Cesar de los RABOS ဟုသူကပြောသည်
သံသယမရှိဘဲ, အများဆုံးအသုံးပြု ... ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးမဟုတ်; ၎င်းသည်အလင်းဖြစ်ပုံရသော်လည်းကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသောကွန်ပျူတာများတွင်ပြိုလဲသွားသည်။
အားလုံးထဲတွင်တစ်ခုရှိသော်လည်းအကောင်းဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သည့် Mozilla သည် SeaMonkey အတွက်အသစ္စာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။
Firefox နှင့် Thunderbird တို့ကိုနေရာချထားခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည် Linux ဖြန့်ချိမှုအားလုံးဖြစ်သော -SeaMonkey- တွင်ပုံမှန် browser ဖြစ်ရန်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။
César de los RABOS သို့စာပြန်ပါ
ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်စစ်တမ်းများတွင်၎င်းကို၎င်းကိုအသုံးအများဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လူအများအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စစ်တမ်းများသည်၎င်းကိုအသုံးအပြုဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ များစွာသောသူများအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအကြံပေးရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်ကွန်ပျူတာကောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်နှင့်လူများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စရာများကိုသတိပေးရန်လိုသည်။ လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်တူညီသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Firefox ကိုအမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိသည်။ ငါအော်ပရာကိုလည်းကြိုက်တယ် ငါလည်း Waterfox အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းဖတ်ဖူးတယ်။
ချက်မာဂိုမာဇ် (@ejoagoz) ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးထင်နေဆဲဖြစ်သောမီးလျှံမြေခွေးကိုကျွန်ုပ်ဆဲဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Chrome သည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် IE နှင့် Edge ကိုခွဲခြားရန်စတင်သင့်သည်။ ၄ င်းတို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအတူတူမဖြစ်ခဲ့ကြပါ။ ယခု၎င်းသည်ခရိုမီယမ်ကိုအခြေခံပြီး၎င်းသည်၎င်းနှင့်မပတ်သက်ပါ။ အလွန်ကောင်းသည်။ ငါတကယ် Linux မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊
Chema Gómez (@ejoagoz) ကိုအကြောင်းကြားပါ။